Apple ID (သို့) iTunes Account ဆိုတာဘာလဲ ? ~ Mobile Knowledge
Apple ID (သို့) iTunes Account ဆိုတာဘာလဲ ?
Posted on 3:13:00 AM by Ko Ye
ဒီပို့စ်လေးကိုကျွန်တော်အစတုန်းကရေးဖို့စိတ်ကူးမရှိပါဘူးဒါပေမယ့် မဖွင့်တတ်သေးတဲ့သူတွေရှိသေးလို့ ရေးပေးလိုက်တာပါ ။
ကျွန်တော်လဲလေ့လာနေဆဲဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်တော်သိသလောက်ပြန်လည်မျှဝေထားတာမို့လို့ အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပါလို့ ကျွန်တော်အရင်ဆုံး တောင်းပန်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျားး။ :)
Apple ID ဆိုတာ App Store ထဲကနေ Applications တွေ Games တွေ Download လုပ်ယူဖို့အတွက်တော်တော်လေးကို အရေးပါပါတယ် ။ ဒါတင်မကပါဘူး iCloud ကိုအသုံးပြုဖို့ဆိုရင်လဲ Apple ID ပာာမရှိမဖြစ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်မြန်မာပြည်မှာတော့ iCloud အသုံးပြုသူတွေသိပ်မများပါဘူး။ဒါ့အပြင်Apple ID ပာာ iDevice တွေအတွက် လဲတော်တော်အရေးပါပါတယ်.iDevice ကြီးတစ်လုံးလုံးကိုင်ပြီးတော့ Apple ID တစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုရင်တော်တော်အောက်ပါတယ်။
Apple ID ဖွင့်တဲ့နည်းကတော့နှစ်နည်းရှိပါတယ်
2. Browser ပေါ်ကနေဖွင့်တာရယ်ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိပါတယ်
ပထမနည်းလမ်းကတော့ပိုသေချာပါတယ် ဒုတိယနည်းလမ်းကတော့ကျွန်တော့်အကြိုက်ပဲဒါပေမယ့် အဲးဒီနည်းက အခုတော့ သုံးလို့မရတော့ပါဘူး ဆိုလိုချင်တာကတော့းဒုတိယနည်းကတော့ Apple ID ဖွင့်လို့တော့ရမယ်။ဒါပေ
မယ့် Payment Information step ဖြတ်တဲ့အခါကျရင် ရဖို့မရဖို့ဆိုတာမသေချာတော့ပါဘူးအရင်တုန်းကတော့ရပါတယ်ဒါပေမယ့်အခုကျွန်တော်စမ်းကြည့်တော့မရတော့ပါဘူး
အဲဒါကြောင့် ပထမနည်းလမ်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပါတော့မယ်။အဲဒီနည်းလမ်းကိုပဲသုံးတာ Free Apple ID ရဖို့လဲပိုသေချာပါတယ် အဲဒါကြောင့်ပထမနည်းလမ်းကိုပဲသုံးဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
Apple ID (or) iTunes Account ဖွင့်ရင်ကျွန်တော် အမြဲ တမ်း Singapore ကိုပဲရွေးပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Singapore နဲ့ဖွင့်တာကလူတော်တော်များများအတွက်လွယ်လို့ပါ။
USအကောင့်ကိုတော့ မဖွင့်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ US အကောင့်က Free မရတာတွေတော်တော်များလို့ပါ။ ဖွင့်ရင်လဲ တစ်ခါတစ်လေမှရတတ်ပါတယ် အမြဲတမ်းမရတတ်ပါဘူး ။အဓိကကကွန်နက်ရှင်နှေးနေရင် Please contact to iTunes Support to complete this translation. ဆိုပြီးပေါ်လာတတ်ပါတယ် ။အဲဒါကြောင့် US Account ကလိုင်းမကောင်းရင်ဖွင့်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် US Account ဖွင့်တာလဲ ဒီနည်းအတိုင်းပဲ ဘာမှမကွာသွားပါဘူး။
Apple ID (or) iTunes Account ဖွင့်ဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်များ
1.Gmail အကောင့်နှစ်ခုလိုပါတယ် တစ်ခုကတော့ ကိုယ်သုံးဖို့ အကောင့်ရယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Main Account က ပြသနာတစ်ခုခုဖြစ်ရင် ရှင်းပေးဖို့အတွက် (ဥပမာ- Password မေ့,စသဖြင့်) အဲဒီအခါကျရင် သုံးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။
2.မိမိဖွင့်မယ့်နိုင်ငံရဲ့လိပ်စာလိုအပ်ပါတယ်( လိပ်စာအတွက်ကတော့ ကျွန်တော် အောက်မှာပေးထားပါတယ်)
3.အမြဲတမ်းမှတ်မိနေမယ့် Security Question လိုအပ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မိမိ Apple ID ပာာစက်အသစ်မှာ တစ်ခုမှာမသုံးဖူးသေးတဲ့အခါဆိုရင် Device အသစ်မှာသုံးရင် တစ်ခါတစ်လေ Security Question ဆိုပြီးပေါ်လာတတ်ပါတယ်။အဲဒီအခါကျရင် Security Question ဖြည့်ဖို့အတွက် အမြဲတမ်းမှတ်မိနေမယ့် Security Question လိုအပ်ပါတယ်။ဒါ့အကြောင့် Birth of Date ကိုလဲ ပေါ့ပေါ့လွယ်လွယ်မဖြည့်ဘဲ အမှန်အကန်ဖြည့်တာပိုကောင်းပါတယ်သူကလဲ Security Question လိုမျိုးအရေးပါလို့ပါ။
4.မိမိ PC ပေါ်မှာ iTunes ရှိဖို့လိုပါမယ် အကယ်လို့မရှိသေးဘူးဆိုရင်အောက်ကလင့်ခ်မှာ အခမဲ့ယူနိုင်ပါတယ်။
Apple ID (or) iTunes Account ဖွင့်နည်း
SG (Singapore) Apple ID ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့အရင်ဆုံး iTunes ရဲ့ ညာဘက်ထောင့်အောက်ဆုံးမှာ နိုင်ငံအလံလေးရှိပါတယ် အဲဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ Euro,Asia ဘာညာဘာညာဆိုပြီးရှိပါတယ် အဲဒီမှာ Singapore ဆိုတာလေးက Asia ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာရှိပါတယ် အဲဒီအခါကျရင် စင်ကာပူအလံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ ခဏနေရင် ပြန်ပေါ်လာပြီဆိုရင် iTunes ညာဘက်ထောင့်အောက်နားလေးမှာ Singapore အလံလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင် ရပါပြီမဖြစ်သေးရင်တော့ အပေါ်ကနည်းအတိုင်း ပြန်လုပ်ပါ။
၁။ပထမဆုံး iTunes ကို PC ပေါ်မှာဖွင့်လိုက်ပါ ။ ပြီးလျှင် iTunes Store ကိုသွားလိုက်ပါ
၂။ အကယ်လို့ iTunes မှာ Apple ID တစ်ခုခုဝင်ထားတယ်ဆိုရင် Sing out လုပ်လိုက်ပါ။
၃။ Free App တစ်ခုကိုရှာပြီးတော့ Download လုပ်လိုက်ပါ။ညာဘက်ထောင့်အောက်ဆုံးနားလေးမှာရှိတတ်ပါတယ်။
၄။အဲဒီလိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ Sing in Box လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ် အဲဒီ Box လေးရဲ့ Sing in ဘေးနားလေးမှာ Create an account ဆိုတာလေးရှိပါတယ် အဲဒီ Create an account ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
၅။ Welcome to iTunes Store ဆိုပြီး ပေါ်လာပြီဆိုရင် Continue ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ
၆။နောက်တစ်ခုထပ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့လေးထောင့်အကွက်အောက်နားလေးမှာ I have read and agree the terms and condition ဆိုတာလေးကိုအမှန်ခြစ်ပြီးတော့ Agree ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက် ပါ။
၇။အဲဒီအခါကျရင် Email တို့ Security Qestion တို့ ဘာတို့ ပေါ်လာပါပြီ အဲဒီအခါကျရင် ကိုယ်ဖွင့်မယ့် Email ကို Email ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဖြည့်လိုက်ပါ။ Password မှာတော့ကိုယ်ဖြည့်ချင်တာဖြည့်လိုက်ပါ ဒါပေမယ့် Password ကိုကိုယ်ထားချင်တိုင်းထားလို့မရပါဘူး Password အလုံးရေပာာ အနည်းဆုံး ၈ လုံးရှိရပါမယ်။ဒါ့အပြင် ABCDEFG.....,..Z အထိ အင်္ဂလိပ် အကွရာ အကြီးတစ်လုံးလိုပါတယ်။
ဥပမာ အကြမ်းဖျင်းပုံစံကတော့-Zawwonna28 အဲဒီလိုမျိုးပေါ့
၈။ Security Question ရွေးရပါမယ် အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ မှတ်မိလွယ်မယ့် Security Question လေးကိုထားရပါမယ်
၉။Recovery Mail ကိုဖြည့်ပေးရပါမယ်
၁၀။ Birth of Date ကိုဖြည့်ပါ မှန်မှန်လေးဖြည့်ပေးရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ ဒါပေမယ့် Apple ID က ၁၈(သို့)၁၇ နှစ်မပြည့်ရင် ဖွင့်ခွင့်မပေးပါဘူး အဲဒါကြောင့် မို့လို့ ၁၈(သို့)၁၇ နှစ်မပြည့်သေးတဲ့သူတွေကတော့ မှတ်မိလွယ်မယ့် Birth of Date ကိုလိမ်ဖြည့်လိုက်ပေါ့နော်
၁၁။ ပြီးရင်တော့ Continue ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
၁၂။ Continue နှိပ်ပြီးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ Payment Type မှာ Master Card,Visa,Paypal , None စသဖြင့်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ။အဲဒီအခါကျရင် None ကိုရွေးလိုက်ပါ
၁၃။ Billing Address မှာ ကိုယ့်နာမည်တို့ဘာတို့ဖြည့်လိုက်ပါ
၁၄။ Address မှာတော့
Zip Code-1391934(ဒါကတော့ကျွန်တော်မသေချာဘူးဗျ ကျွန်တော်ရမ်းသမ်းပြီးပေးထားတာ အကယ်လို့မှားနေတယ်ဆိုရင်တော့ အနီရောင်စာလေးနဲ့ ပေါ်လာလိမ့်မယ် အကယ်လို့ ဂဏန်းက လိုနေတယ် ပိုနေတယ်ဆိုရင် ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ပိုနေတယ်ဆိုရင်လျှော့လိုနေတယ်ဆိုရင် တိုးလိုက်ပါ ကြိုက်တဲ့ဂဏန်းရပါတယ်)
ပြီးရင်တော့ Continue ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ။
၁၅။ ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Verify your Apple ID လို့ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ မိမိ Mail ကို Browser မှတစ်ဆင့် ဖွင့်လိုက်ပါ
၁၆။အဲဒီအခါကျရင် မိမိ mail ထဲမှာ Apple ဆီကမေးလ်တစ်စောင်ရောက်နေပါလိမ့်မယ်အဲဒီမေးလ်ကိုဖွင့်လိုက်ပါ
၁၇။Verify ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ Apple ID Password နဲ့ username လေးကိုဖြည့်ပေးလိုက်ပါအဲဒီအခါကျရင် (E)mail address verified လို့ပေါ်လာရင် Apple ID အသစ်စက်စက်လေးကိုသုံးလို့ရပါပြီ :D
ကဲ အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ :D အဆင်မပြေတာ့ရှိရင် comment လေးချန်ခဲ့ပြီးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ် :D